Cunnooyinka Jilicsan - Waa Maxay Cunnooyinka La Cuno Kuwaanse Aan Cunayn? | Cuntada Nutri
Hadaad waligaa maqashay Cunto xumo, Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad ogaato waa inaysan ahayn miisaan lumis qorshe ah inaad lumiso taxano kiilo ah maadaama ay ku dhacdo noocyada kale ee cuntooyinka sida cuntada Atkins ama Perrone. Haddii aad xiiseyneyso oo aad rabto inaad wax badan ka ogaato cuntada jilicsan, markaa wax walba waan sharaxayaa Maxay tahay inaad ogaato ku saabsan, waxa ay ka kooban tahay iyo yaa dad ah inay raacaan.
1 Waa maxay cuntada jilicsan?
2 Cunto noocee ah ayaad ku cuni kartaa cuntada jilicsan?
3 Cunnooyinka la mamnuucay oo ay tahay in laga fogaado cunnooyinka xun
4 Tusaalooyinka cuntada ee cuntada jilicsan
5 Raac cunto caafimaad leh oo miisaaman
6 Tilmaamaha ugu dambeeya ee ku saabsan cuntada caatada ah
Cunnooyinka jilicsan ayaa ah qorshe cunitaan muddo cayiman ah dhakhaatiirta ayaa kuu qora ka hor cudurrada dheef-shiidka ee kala duwan ama nooc ka mid ah faragelinta qalliinka ka hor. Dhakhtarku wuxuu doortaa cuntada noocan ah, si bukaanku u helo si fudud ayuu u cuni karaa cuntada iyo inaad calali karto oo aad liqi karto dhibaato la'aan. Xaalado badan ayaa cuntadan sida caadiga ah la raacaa markii ay dhammaato cunto dareere ah bukaankuna wuxuu diyaar u yahay inuu si tartiib ah oo taxaddar leh u liqo. Halabuurka cuntada, way kala duwanaan doontaa iyadoo kuxiran xaalada caafimaad ee bukaan socodka.
Cunto noocee ah ayaad ku cuni kartaa cuntada jilicsan?
Waxaa jira tiro badan oo ah cuntooyin aqoon leh sida jilicsan taasina waa mid ku habboon in lagu daro noocyada cuntada ah, ee qofka raacaya kharashka calalinta, liqidda ama waxay u baahan tahay fudayd iyo dheef-shiid aan dhib lahayn. Qaar ka mid ah cuntooyinka qayb ka noqon kara ee cuntada jilicsan Waxay yihiin:
Boorash badar sida oatmeal ama sarreen semolina.
Baastada la kariyey ilaa ay siman tahay oo ay fududahay in la cuno.
Miraha jilicsan oo jilicsan sida muuska bislaaday, cantaloupe, ama qaraha.
Miraha la kariyey ama la kariyey sida barow ama tufaax.
Khudaarta la kariyey ee aan maqaarka lahayn oo si fudud ayaa loo shiidi karaa sida dabacasaha ama cauliflower.
Productos lácteos sida caano fadhi ama jiis la faafiyo.
Kuwani waa tusaalayaal kooban oo ah cuntooyinka aad awoodid cab dhibaato la'aan qof raacaya cuntada jilicsan.
Cunnooyinka la mamnuucay oo ay tahay in laga fogaado cunnooyinka xun
Waxaa jira tiro cuntooyin ah waxa ay tahay inaad iska ilaaliso intaad raaceysid cuntada noocan ah maadaama ay ugu xunyihiin dheefshiidka wanaagsan ama way adag tahay in la dheefshiido ama la calaliyo. Cunnooyinka la mamnuucay qaarkood waa:
Rootiyo leh iniin iyo miraha miraha oo dhan.
Duruus maqaar adag leh sida digir ama digir
Tufaaxa, fersken, ama cananaaska.
Hilib cas, digaag ama turkey.
Sausages ama hamburgers.
Jiis la daweeyey.
Tusaalooyinka cuntada ee cuntada jilicsan
Dad badan ayaa u maleynaya in cunnida qaniga ah ay ku heli karto caajis noqo oo adag, si kastaba ha noqotee, hoosta waxaan ku tusayaa tusaalooyin ka mid ah liiska qaarkood kaas oo aad ugu raaxeysan karto cuntooyin kaladuwan inta lagu guda jiro noocan ah cuntada iyo wax yar cun.
Ukunta duudduuban leh jiiska, jiiska dhalaalay iyo qaraha yar.
Ukun la kariyey iyo yogurt creamy.
Smoothie lagu sameeyay caano, moos, budada kookaha, caano fadhi, iyo macaan ama sonkor yar.
Salad Tuna leh majones iyo dhir udgoon. Tufaax tufaax ah.
Salad ukunta leh majones iyo xawaash. Xabxab Salad.
Digir daahir ah. Baro ku yaal macaan.
Turkiga ayaa la duubaya xaleef avokado.
Baastada Salad leh Tuna.
Salmon la dubay oo leh baradho macaan.
Qudaarta isbinaajka iyo kaabul shiidan.
Raac cunto caafimaad leh oo miisaaman
Aad ayey muhiim u tahay inaad ogtahay in cunista cuntada jilicsan aysan khilaafsanayn cunista cuntada nooc caafimaad leh oo dheellitiran kaas oo jidhkaagu qaabilo wax walba nafaqooyinka lagama maarmaanka ah hawlgal wanaagsan oo isku mid ah. Ma seegi karo kooxaha cuntada muhiim u ah miraha, khudradda, waxyaabaha caanaha laga sameeyo ama badarka. Markaas ayaan ku siin doonaa a talooyin taxane ah si jirkaagu u helo cunto caafimaad leh:
Ka fogow cunista cuntada badan markasta hodan ku ah sonkorta, gaar ahaan kuwa aan lahayn qiimo nafaqo.
Ku dar cuntada cuntooyinkaaga midabada (cagaar, jaalle ama oranji) si loo hubiyo qaadashada ku filan ee fiitamiinada jirkaaga.
Waa inaad wax cuntaa ugu yaraan qiyaastii 1.200 kaloori maalintii. Haddii maalintiina maalinka ka mid ah aad cunayso kaloriin ka yar kuwa kor lagu soo sheegay, waxa ugu badan ee caadiga ahi waa jidhkaaga bilow murqo luminta hab horumar leh.
Aad u taxaddar markay tahay cunitaanka dufanka. Xaqiiqda ah inaad raaceyso cunto jilicsan macnaheedu maahan inaad leedahay xoriyad buuxda oo ah inaad cuntid noocyada dufanka oo dhan. Si looga fogaado qaadashada dufanka noocaas ah, waxaa ugu wanaagsan in gebi ahaanba la cuno waxyaabaha caanaha laga sameeyo duugoobay ama duugoobay oo isticmaal maraq yar oo hilib ah si aad u siiso kuwa saafiga ah dhadhan fiican.
Tilmaamaha ugu dambeeya ee ku saabsan cuntada caatada ah
Haddii sababo kala duwan aad u raaceyso cuntada jilicsan, waxaa aad muhiim u ah inaadan lumin faahfaahin qaar tilmaamaha ugu dambeeyay ee cuntada ama talooyinka. Isku day inaad si fiican u calashado oo si tartiib ah wax u cunto, si aad ugu fududaato dheefshiidka sida ugu macquulsan ee aadan u haysan dhibaatooyinka caloosha sida caadiga ah sida gaaska dhibsado. Markaad dhamayso cunista, isku day inaad nasato daqiiqado yar oo fududee dheef-shiidka noocaas ah.
Waxa ugu badan ee lagula taliyo waa in la ilaaliyo cuntada jilicsan inta lagu jiro qiyaastii 3 0 4 maalmood ka dibna aad inyar ama in yar u soo bandhigid noocyo badan oo cunto ah si loo gaadho cunto caadi ah oo aad ku cuni karto nooc kasta oo ka mid ah nafaqooyinka lagama maarmaanka ah iyo fiitamiinnada jirkaaga. Haddii aad ogaatid in maalmahan ka dib, wali aad dhibaato ku qabtid markaad cunayso cuntooyinka qaarkood, waa inaad u tagtaa dhakhtarkaaga aad ku kalsoon tahay.
Sidaad ku aragtay oo aad ku akhrisay qodobkaan, waa suurtagal in la sameeyo cunto caafimaad leh, dheellitiran oo hodan ah xitaa haddii aad ku jirto cunto jilicsan. Raacitaanka tilmaamo taxane ah oo leh hal-abuur yar Waad abuuri kartaa menu xiiso leh oo kaa caawinaya inaad si dhakhso leh uga soo kabato dhibaatooyinkaaga caafimaad isla markaana u siisa nafaqooyin wanaagsan jirkaaga.
Hoos waxaan ku tusayaa fiidiyoow ay wax walba u caddayn doonaan iyo maxay yihiin cuntooyinka aad ku dari karto nooca noocan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Cuntada » Cunnada jilicsan
Tani waa talooyinka ugu xun ee loogu talagalay cuntada jilicsan ee aan waligay akhriyay.
Tilmaamo si loo yareeyo xididdada xididdada leh yaanyada cagaaran iyo casaanka
Gubo baruurta iyo kalooriyada adoo socda